Warar - Talooyin ku saabsan Xirashada Maaskarada Wejiga Maalinlaha ah
Raac talaabooyinkan si aad u xidhato, uga baxdo oo u xidhato maaskaro 3M waji-maalinle ah. Maaskarada maalinlaha ah waxay ku habboon yihiin xirashada maalinlaha ah ee goobaha dadweynaha, waa la dhaqi karaa oo dib ayaa loo isticmaali karaa qiime muddo dheer soconaya. Maaskaradayada wajiga maro aan caafimaadka ahayn waxay leeyihiin laba lakab oo ah cudbi cudbi ah, wareegyada dhegaha la hagaajin karo iyo sanka goos gooska loogu talagalay raaxada.
Talooyin maskaxda lagu hayo
Ku dadaal nadaafadda
Ku dhaq gacmahaaga biyo diiran oo saabuun leh 20 ilbidhiqsi ka hor intaadan xirin iyo ka dib saarista 3M waji-wajigaaga maalin kasta si looga fogaado in wasakh ama jeermis loogu wareejiyo maaskaro. Ku isticmaal gacmo nadiifiye ugu yaraan 60% aalkolo haddii aadan gacmaha iska dhaqi karin.
Hubso in maaskaro uu ku jiro xaalad wanaagsan
Maaskarada u qaad dhejiska dhegaha oo baari kahor intaadan xirin. Haddii aad aragto godad, ilmo ama waxyeelo kale, iska tuur oo isticmaal mid cusub oo xaaladdiisu wanaagsan tahay.
Ha xoqin xarka sanka
3M waji-wajiga maalinlaha ah waxay leeyihiin sanka oo la hagaajin karo. Halkii aad ka xiri lahayd sanka xiritaanka, u adeegso labada gacmood si aad u laabto sanka si aad ugu nasanayso sankaaga iyo wejigaaga.
Caymis buuxa waa muhiim
Maaskarkaagu waa inuu daboolaa sankaaga iyo afkaaga wakhti kasta, xitaa markaad dhaqaajineyso afkaaga ama madaxaaga. Maaskarada waa inay ku raaxeysataa si raaxo leh oo wejigaaga ah.
Markuu daaran yahay, sii wad
Qaadashada maaskaro wajigaaga oo banaanka loo dhigo iyo waxay furan tahay waxay fursad u tahay jeermiska inuu ku faafo - kuna soo noqdo jirkaaga. Intaad ku dhexjirtid dadweynaha, maaskaro-maaskaaga hoos ha uga soo bixin buundada sankaaga ama ha u dhaafin hal dheg. Maaskarada ayaa kaliya waxtar u leh isticmaalaha, markaa ku hay ilaa intaad ka agdhowaan kuwa kale.
Nadiifi maaskaro si dhakhso leh oo sax ah
Maaskarada wajiga ee maalinlaha ah waa in la dhaqaa isticmaal kasta ka dib si loo yareeyo faafitaanka jeermiska. Gacmaha si xoog leh ugu dhaq maaskaradaas biyo diirran ugu yaraan 5 daqiiqo. Biyo raaci oo qalaji. Isku-darkayaga isku-dhafan ee habboon ayaa macnaheedu yahay in laguu dejin doono dhowr dibedda.
Waxaan ku tusayaa inaad daryeesho adiga oo xiranaya maaskaro goobaha dadweynaha.
Kala fogaanshaha bulshada, xirashada wejiga wajiga ayaa ah hab muhiim ah oo lagu tusi karo inaad danaynayso daryeelka bulshadaada. 3M Waji Qarinta Maaskarada ayaa ah ikhtiyaar aad u fiican oo lagu tagi karo inta lagu jiro howlaha maalinlaha ah sida shaqada, dukaameysiga iyo is dhexgalka bulshada Macluumaadka Badbaadada ee Muhiimka ah: Haddii aad leedahay xaalado caafimaad sida neefta, xaaladaha wadnaha ama xaaladaha neefsashada, waa inaad la tashataa bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga (takhtarka) ka hor intaadan isticmaalin.
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah, Maaskaro Ffp3, 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka, Heerka 3 Maaskarada Qalliinka,